ZAVAKANTO SY FANDRAHARAHANA :: Manaitra ny aingam-pamoronan’ ny tanora ny « M’koloproject » • AoRaha
ZAVAKANTO SY FANDRAHARAHANA Manaitra ny aingam-pamoronan’ ny tanora ny « M’koloproject »
Ampinga iray natao hampiroboroboana ny hahamatihanina ireo sehatr asa manodidina ny zavakanto sy ny kolontsaina ny « M’KoloSaina 2.0 ». Tafiditra ao anatin’ity fandaharanasa novolavolain’ny ADMC-Craam ity koa ny « M’Koloproject ».
Fifaninanana hoentina manaitaitra ny fahaiza-mamorona sy mitantana sehatra iray mahakasika ny zavakanto sy ny kolontsaina ny « M’Koloproject ». Ny tanora no tena kendrena hirotsaka an-tsehatra amin’io famoronana tetikasa io, izay tokony ho azo tanterahina tsara. Takiana ny tetikasa mitondra hevi- baovao fa tsy maka tahaka ny lasitra efa ataon’ny hafa. Andrasana ihany koa ny tetikasa mifanaraka tsara amin’ny zava-misy eo amin’ny fiarahamonina sy ny toekarena malagasy.
Manana iray volana ny mpandray anjara handefasana ny taratasy rehetra ilaina, toy ny fampahafantarana mazava ny mahakasika ny tetikasa. Misokatra ho an’ny tanora 30 taona no midina ny fifaninanana. Mila ny fahazoan-dalana avy amin’ ny ray amandreny kosa ho an’ireo latsaky ny 18 taona.
Tanjon’ny mpikarakara ny hampirisika ny mpianatra amin’ny lafiny fandraharahana sy ny famoronana fidiram-bola sy asa ho an’ny hafa. Hojerena mandritra ny fifaninanana, ireo hita fa hitoeran’ny ho avin’ny fandraharahana, indrindra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina. Hivoaka ny 17 janoary 2019 ny valin’ny sivana voalohany amin’ny fifaninanana. Hoampahafantarina ny 23 janoary kosa ireo mpifaninana mendrika indrindra.
Sarimihetsika Handefa horonantsary malagasy ny Cinépax
Tontolon’ny dihy Hizara traikefa any ivelany ny kaompania Rary
Haikanto sy fitaizana Entanin’ny Is’Art Galerie hikajy ny tontolo iainana ny ankizy
Fizarana traikefa Hampianatra ny teknikan’ny saripika ny Next A
HETSIKA FARAN’NY TAONA :: Mangingina ny fety hanaovam-beloma ny taona 2018
FANDRAISANA NY TAONA VAOVAO :: Sambany hisoratra amin’ny Teny malagasy ny « Coca-Cola »